स्विट्जरल्याण्डमा किन जमीनमा अण्डरवेयर गाडिरहेका छन् मानिस ? « Mero LifeStyle
स्विट्जरल्याण्डमा किन जमीनमा अण्डरवेयर गाडिरहेका छन् मानिस ?
माटोको गुणवत्ता परीक्षण गर्ने तरिका के तपाईलाई थाहा छ ? यदि छैन भने तपाईले स्विट्जरल्याण्डमा गरिरहेको अनौठो प्रयोगको बारेमा जान्न आवश्यक छ ।
विशेषज्ञहरु कहिले ल्याबमा र कहिले खेतमा माटोको परीक्षण गर्दछन् । तर स्विट्जरल्याण्डमा २ हजार अण्डरवियरलाई माटोमा गाडिएको छ । यस्तो गर्नुको कारण मात्र माटोको स्वास्थ्यका परीक्षण रहेको छ । खबरका अनुसार, स्विट्जरल्याण्डमा किसान माटोको गुणस्तर परीक्षणका लागि जमीनमा यसरी २ हजार अण्डरवेयर गाडिरहेका हुन् ।
यसरी जाँच स्विट्जरल्याण्डको अनुसन्धान संस्थान एग्रोस्कोपको तर्फबाट गरिएको हो । अनुसन्धान गरिरहेको टीमले नै किसानलाई अण्डरवियर पठाएको हो । एग्रोस्कोपले एक निर्धारित समयपछि यी अण्डरवेयरलाई जमीन बाहिर निकाल्नेछ । र त्यसको फोटोग्राफी गराउनेछ । त्यसपछि जाँच शुरु गर्नेछ ।
स्विट्जरल्याण्डमा भइरहेको यो अनौठो अनुसन्धानमा वैज्ञानिकले जमीनमा राख्दा अण्डरवियरमा देखिने असरको बारेमा जाँच गर्नेछन् । त्यस्तै वैज्ञानिकले कपडामा ब्याक्टेरिया र अन्य साना जीवाणुहरुको हमला कति हुन्छ र यसले कति कपडा नष्ट गर्दछ भन्ने बारेमा पनि अनुसन्धान गर्नेछन् । यदि कपडा धेरै नष्ट भएमा जमीन राम्रो र माटोमा पर्याप्त तत्व रहेको पुष्टि हुनेछ ।
एग्रोस्कोपका अनुसार यो प्रयोगमा सामेल भएका किसानलाई अण्डरवेयर गाड्नको लागि एक टी ब्याग पनि दिइनेछ । किनभने अण्डरवेयर र टी ब्यागमा तुलना गर्न सकियोस् । एक महिनासम्म अण्डरवेयर जमीनमा गाडिनेछ । त्यसपछि विश्लेषणच गरिनेछ ।